Samachar Batika || News from Nepal » आज महावीर जन्म–जयन्तीः को हुन् महावीर स्वामी ?
आज महावीर जन्म–जयन्तीः को हुन् महावीर स्वामी ?
आज महावीर स्वामी जन्म जयन्ती, हरेक वर्ष चैत महिनाको शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथिमा यो जन्म जयन्ती मनाइन्छ । महावीरले जैन धर्मको खोजसँगै यस धर्मका प्रमुख सिद्धान्तहरुको प्रतिपादन गरेका थिए ।
महावीर स्वामीलाई जैन धर्मका २४ औं तीर्थकर तथा भगवान्का रुपमा पूजा गरिन्छ । त्यसैकारण यस दिन भगवान् महावीरको शोभा यात्रा निकालिन्छ, जसमा जैन धर्मका अनुयायीहरुको ठूलो सहभागीता रहन्छ । तर यसपटक कोरोनाका कारण आफ्नै घरमा उनीहरुले पूजा गर्नेछन् ।
भगवान् महावीरलाई वीर, वर्धमान, अतिवीर र सन्मतिको नामले पनि सम्बोधन गरिन्छ । उनले आफ्नो जीवनमा तप र साधनाको नयाँ प्रतिमान स्थापित गरेका थिए । महावीर जयन्ती २०२१ का अवसरमा उनको जीवनसँग जोडिएका प्रमुख विषयबारे जान्नुस् –
को थिए महावीर
महावीरको जन्म बिहारको कुण्डग्राममा ईसापूर्व ५ सय ९९ वर्ष पहिले चैत शुक्लको त्रयोदशीका दिन एक राज परिवारमा भएको थियो । उनका पिताका नाम राजा सिद्धार्थ र माता रानी त्रिशला थिइन् । भगवान् मावीरको बाल्यकालको नाम वर्धमान थियो । १२ वर्षसम्मको कठोर तपस्यापछि उनले आफ्ना इन्द्रियहरुमाथि विजय प्राप्त गरेको मानिन्छ । त्यसैकारण उनलाई महावीर नामले सम्बोधन गरिएको थियो । राज परिवारमा जन्म भएपछि संसारसामु ज्ञान फैलाउनका लागि उनी सन्त बनेका थिए ।
महावीरको विवाहलाई लिएर दुुईथरी मत छ । श्वेताम्बर सम्प्रदायका मानिसहरु उनको विवाह यशोधरासँग भएको मान्छन् । उनीहरुका अनुसार यो जोडीकी एक छोरी प्रियदर्शना निकै सुन्दर थिइन् । यद्यपी, दिगंबर सम्प्रदायका मानिसहरुका अनुसार महावीरको विवाह भएको थिएन ।
३० वर्षको उमेरमा घर छाडे
महावीरले ३० वर्षको उमेरमै राजमहलको वैभवपूर्ण जीवन परित्याग गरेका थिए । यसपछि उनी ज्ञान र साधनाको बाटोमा हिंडे । एउटा अशोक वृक्षमुनी बसेर ध्यान गर्न थाले । उनले आफ्नो कठोर तपस्यामार्फत सबै इच्छाहरु र विकारहरुलाई काबुमा लिए । त्यसपछि उनी वर्धमानबाट भगवान् महावीरका रुपमा चिनिन लागे । उनले आफ्नो पूरै जीवन जनकल्याणमा समर्पित गरिदिए । उनले समाज व्याप्त कुरुती र अन्धविश्वासलाई टाढा गरिदिए ।
भगवान् महावीरले मोक्षको प्राप्तिपछि पाँच सिद्धान्तका विषयमा बताए । उनले आफैं यसको पालना गरे र उनी गइसकेपछि उनका अनुयायीले महावीरद्धारा प्रतिपादित पाँच सिद्धान्तलाई मानिसहरुसम्म पु¥याउने काम गरे ।
उनले आफ्ना प्रत्येक अनुयायीका लागि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, बम्ह्चर्य र अपरिग्रहका पाँच व्रतहरु पालना गर्नु आवश्यक छ भन्ने बताए । यी सबै व्रतमा अहिंसाको भावना सम्मिलित छ । यहीकारण जैन विद्धानहरुको प्रमुख उपदेश ‘अहिंसा नै परम धर्मको, अहिंसा नै परम ब्रम्ह् हो, अहिंसाले नै सुख शान्ति दिन्छ’ भन्ने हुन्छ ।
झन्डै १२ वर्षको साधनापछि महावीरलाई सच्चा ज्ञान प्राप्त भयो । यसपछि महावीर स्वामी जैन धर्मको २४ औं र अन्तिम तीर्थकर बने । महावीरजीले अलग–अलग स्थानमा गएर जैन धमैका प्रचार गरे । उनले मानिसहरुलाई सही मार्ग देखाएर राम्रो जीवन जिउने प्रेरणा दिए ।
प्रकाशित मिति १२ बैशाख २०७८, आईतवार ०६:४९